PV Cable Sunga vatengesi uye fekitori - China PV Cable Sunga Vagadziri
4to1 MC4 Y Bazi Rinobatanidza Solar Panel Parallel Kubatana
4to1 MC4 Y Branch Connector Solar Panel Parallel Connection (1 Set = 4Murume1 Mukadzi + 4Female 1Male) ibhendi reMC4 tambo dzekubatanidza dzemagetsi ezuva. single Connector kubva kuPV Modules, .Iyi 4Y bazi yekubatanidza inogona kukodzera ese MC4 Type Photonic Universe solar panels.Iri 100% isina mvura IP67, saka inogona kushandiswa panze mune chero mamiriro ekunze.
IP67 Parallel Kubatanidza 1 Kune 3 Y Type Y Bazi PV Solar Power Connector
IP67 Parallel Kubatanidza 1 Kusvika 3 Y Rudzi Y Bazi PV Solar Power Connector (1 Seta = 3Murume1Mukadzi + 3Mukadzi1Murume) ipara yeMC4 tambo yekubatanidza ezvezuva mapaneru. Aya ma connector anowanzo shandiswa kubatanidza matatu ezuva mapaneru tambo zvakare yakafanana kubatana, inokwana ne MC4 Mukadzi Male single Connector kubva PV Modules. Iyi 3Y bazi yekubatanidza inogona kukodzera ese MC4 Type Photonic Universe mapaneru ezuva. Iyo 100% isina mvura (IP67), saka dzinogona kushandiswa kunze mune chero mamiriro ekunze.
2to1 MC4 Y Connector Inobatanidza Solar Panels mune yakafanana kana nhevedzano
2to1 MC4 Y Connector Inobatanidza Solar Paneli mune yakafanana kana akateedzana (1 Set = 2Murume1Mukadzi + 2Female1Male) ipara ye MC4 tambo dzekubatanidza ezvezuva mapaneru. Aya ma connector anowanzo shandiswa kubatanidza maviri ezuva mapaneru tambo zvakare yakafanana kubatana, inokwana ne MC4 Mukadzi Male single Connector kubva PV Ma module. Iyi 2Y bazi yekubatanidza inogona kukodzera ese MC4 Type Photonic Universe mapaneru ezuva. Iyo 100% isina mvura (IP67), saka dzinogona kushandiswa kunze mune chero mamiriro ekunze.
1000V 1500V OEM Yakasarudzika MC4 Solar Extension Cable ine DC Isina Water Connector Male Mukadzi
1000V 1500V OEM Yakasarudzika MC4 Solar Yekuwedzera Cable ine DC Yemvura Isina Kubatanidza Male Mukadzi inoshandiswa muSolar PV system pakati penzvimbo yezuva uye Inverter kana controller bhokisi. Ivo UV kushorwa uye IP68 isapinda, inogona kushanda panze kwe25years. Zvakakosha, MC4 Yekuwedzera Cable inogona kuve OEM muhurefu hwakasiyana uye saizi yetambo sezvaunoda.
50A 600V Andersons Power Connector Adapter Cable inogona kushandiswa chengetedzo mune logistics kutaurirana, Solar PV Systems, Simba rinotyairwa maturusi, UPS Systems, Magetsi mota, Chiremba quipment AC / DC simba nezvimwe. Kune akawanda marudzi akagadzirwa naAnderson emagetsi ekubatanidza, akadai saAnderson kuMC4 Connector, Anderson kuRing terminal, Anderson kuAlligator clip, Anderson kuCigarette lighter nedzimwe tambo dzemagetsi dzeOEM.
Yero Green Girazi waya 4mm 6mm Mhangura Solar Inokanganisa Pasi Cable
Yero Green Girazi waya 4mm 6mm Mhangura Solar Grounding Earth Cable inoiswa kumagetsi ezuva ezve simba rekugadzira uye zvine hukama zvikamu zveiyo wiring kubatana, kunyanya inokodzera yekunze.Resistance kune kwezuva, anti-kuchembera, Uchishandisa yakaderera hutsi halogen-isina murazvo unodzora zvinhu, giredhi repamusoro, chengetedzo yakawanda.